Ịbụ onye nta akụkọ na-akwado isi ihe niile n'ịtụle onwe gị onye mere njem. N'ihi na ịkọ ihe na-eme n'ebe ọ bụla n'ụwa, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma ahụ bụ isi iji kọwaa ihe na-eme na ntụkwasị obi. Nsonaazụ nwere ike ịbụ, dị ka nke a, ụdị akwụkwọ njem iji chọpụta nke ọma ihe niile esiri esi karịa anya na clichés.
Mavi Doñate ji ọtụtụ afọ na-agwa anyị ihe na-eme na China. Oge mgbe anyị nwere ike ịchọpụta ka onye hackneyed "Giant Asia" si bụrụ ebe ọhụrụ nke ụwa. Ma gafere ọhụụ agbụrụ ahụ nke a na-ahụ ihe ọ bụla ọbịa, onye nta akụkọ dị ka Mavi Doñate Herranz bụkwa onye na-ahụ maka iwetara anyị China ndị ọzọ dị n'ime. China ebe omenala ya dị, omenala ya.
N'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na China na-apụta maka inye ụwa onyinyo karịa ọkụ na mmepe akụ na ụba na nke mmekọrịta ọha na eze, ọ dị mkpa ịnweta panorama zuru oke iji dọba ajọ mbunobi nke nwere ike gbasaa na ihe niile metụtara obodo a.
China dị anya. Ọ bụ ihe mbụ onye nta akụkọ nọ na njedebe nke ụwa na-amụta nke anyị etinyebeghị anya nke ukwuu. Mgbe Mavi Doñate rutere Beijing na okpomọkụ 2015 Na vertigo nọ n'afọ ya, o mezuru nrọ nke so ya kemgbe ọ bụ nwata: ka ọ bụrụ onye na-ede akwụkwọ ozi. Ihe m na-enweghị ike iche n'echiche mgbe ahụ bụ na m na-achọ ịmalite kpakpando n'otu n'ime usoro ihe ọmụma kachasị mma nke narị afọ mbụ a.
Mavi Doñate nwere onyinye ebumpụta ụwa, ngwakọta nke nghọta na aghụghọ, ịkọ akụkọ. Ihe ndekọ nke onwe ya nke afọ isii ọ bi na Asia Asia, nke sitere na ncheta na olu ndị a na-ahapụ na ozi kwa ụbọchị, na-enye anyị ihe osise bara uru nke China taa. Ibe ndị a na-agba ọsọ site na ọdịiche nke mba na-emeghachi omume mgbe nile na-ewega anyị site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ụwa na ndụ kwa ụbọchị; site n'oge ọgbara ọhụrụ a na-achịkwaghị achịkwa ruo n'ọdịnala gbanyere mkpọrọgwụ; site na ọgba aghara n'okporo ámá maka ememe Afọ Ọhụrụ ruo na ịgbachi nkịtị nke ụbọchị ọjọọ nke ọrịa na-efe efe, na ha na-echetara anyị na, ruo ọtụtụ iri afọ, anyị ejirila azụ anyị bi na dragọn puku afọ ahụ chere oge ọ ga-eteta.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ "N'okpuru anya nke dragọn teta", nke Mavi Doñate dere, ebe a:
Tags Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Akwụkwọ njem, Mavi kwuru
1 ikwu na "N'okpuru anya nke dragọn ahụ kpọtere, nke Mavi Doñate dere"
Pingback: Akwụkwọ 3 kacha mma nke Olga Merino › February 2022